Amaqabunga okuKhanya okuMbane, iiLibisi zeMbewu eziLungisiweyo, umenzi weBlue Bulb eChina
Inkcazo:Amaqabunga okuKhanya okuMbane ,Led Light Lights,Ibhulabhaka leMbewu,Ukukhanya kwembombo,,
Home > Imveliso > Iimbewu zeBlue Corn > Amaqabunga okuKhanya okuMbane
Iintlobo zeMveliso ze- Amaqabunga okuKhanya okuMbane , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Amaqabunga okuKhanya okuMbane , Led Light Lights ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Iilambu ze-Light bulbs 100W 5000k 13000lm  Qhagamshelana Ngoku
I-120 Watt E39 I-Light Light ye-Bulb ye-15600lm  Qhagamshelana Ngoku
ikhokelele ukukhanya kwebhalbhu yombona 80W  Qhagamshelana Ngoku
I-10400lm 80W ikhokelele ii-bulbs ezingama-5000K  Qhagamshelana Ngoku
I-80 Watts E39 ekhokelele i-bulb 10400lm  Qhagamshelana Ngoku
Amandla aphakamileyo akhokelela kwi-bulb yengqolowa 80W  Qhagamshelana Ngoku
I-80W yakhokelela kwizibane zebhalbhu zombona 100-277VAC  Qhagamshelana Ngoku
Ukukhanya kweNombane kwe-E39 Bulb 100W  Qhagamshelana Ngoku
I-100W E39 ikhokelele ukukhanya kwebhalbhu 13000lm  Qhagamshelana Ngoku
I-100W ikhokelele ukukhanya kwe-5000K E26 / E39  Qhagamshelana Ngoku
I-E26 E27 I-Corn Cob Light Bulb 15W  Qhagamshelana Ngoku
I-E26 E27 12W Iimboleko Zemiqolo Yemiqolo 277 Volt  Qhagamshelana Ngoku
I-GU24 E27 9W iLight Light Lights for Sale  Qhagamshelana Ngoku
I-EW E27 i-Corn Cob Retrofit Bulbs  Qhagamshelana Ngoku
6W E27 I-Corned Cob Light Light Ama-3000K  Qhagamshelana Ngoku
9W E27 I-Corned Cob Light Light 990lm  Qhagamshelana Ngoku
I-E27 6W I-Bulb Light Light ibhekwe ngu-5000K  Qhagamshelana Ngoku
I-80W yeCow Cob iLight Light 10400LM  Qhagamshelana Ngoku
30W 50W I-Bulb Corn Corn E27  Qhagamshelana Ngoku
E40 20w I-Bulb Corn Corner 26000lm 5000k  Qhagamshelana Ngoku
I-E27 i-Corned Corn Bulb Iyayinqabisa 60W 7800LM  Qhagamshelana Ngoku
Iilambu ze-Light bulbs 100W 5000k 13000lm
Amandla okubonelela: 100,00pcs per month
Iilambu ze-Light bulbs 100W 5000k 13000lm I-bbier 100W ikhokelele ii-bulbs zombona , ukushisa okusemgangathweni okuphezulu kwe-USB kunye nomqhubi. Esi sibane seCorn Bulb sigcina ngaphezulu kwe-80% yetyala lombane ngokutshintsha kwe-250W MH / HPS /...
I-120 Watt E39 I-Light Light ye-Bulb ye-15600lm
I-120 Watt E39 I-Light Light ye-Bulb ye-15600lm I-bbier ikhokelele ii-bulbs zombona , ukushisa okusemgangathweni okuphezulu kwe-USB kunye nomqhubi. Le Led Corn Lamp igcina ngaphezulu kwe-80% yetyala lombane ngokutshintsha kwe-250W MH / HPS / HID....
ikhokelele ukukhanya kwebhalbhu yombona 80W
ikhokelele ukukhanya kwebhalbhu yombona 80W Isibhali esikhokele ukukhanya kwebhalbhu yombona , umgangatho ophezulu wokubushushu oshushu we-LEDs nomqhubi. Le Led Corn Lamp igcina ngaphezulu kwe-80% yetyala lombane ngokutshintsha kwe-250W MH / HPS /...
I-10400lm 80W ikhokelele ii-bulbs ezingama-5000K
I-10400lm 80W ikhokelele ii-bulbs ezingama-5000K Bbier 80W wakhokela iibhalbhu ingqolowa, top umgangatho ubushushu utshona ngenxa LED kunye umqhubi. Le Lize ye-Bulb yeLone gcina ngaphezulu kwe-80% yetyala lombane ngokutshintsha endaweni ye-250W MH /...
I-80 Watts E39 ekhokelele i-bulb 10400lm
I-80 Watts E39 ekhokelele i-bulb 10400lm I-bbier ikhokelele ii-bulbs zombona , ukushisa okusemgangathweni okuphezulu kwe-USB kunye nomqhubi. Le Lize ye-Bulb yeLone gcina ngaphezulu kwe-80% yetyala lombane ngokutshintsha endaweni ye-250W MH / HPS /...
Amandla aphakamileyo akhokelela kwi-bulb yengqolowa 80W
Amandla aphakamileyo akhokelela kwi-bulb yengqolowa 80W I-Bbier 8 0W ikhokelele ukukhanya kwebhalbhu yombona , ukushisa okuphezulu komgangatho oshushu we- LEDs nomqhubi. Le Ndlela yeKhona yeKhona engu-80W gcina ngaphezulu kwe-80% yetyala lombane...
I-80W yakhokelela kwizibane zebhalbhu zombona 100-277VAC
I-80W yakhokelela kwizibane zebhalbhu zombona 100-277VAC I-Bbier 8 0W ikhokelele ukukhanya kwebhalbhu yombona , ukushisa okuphezulu komgangatho oshushu we- LEDs nomqhubi. Oku kukhokelele kwisibane sombona kwigumbi lokugcina igaraji gcina ngaphezulu...
Ukukhanya kweNombane kwe-E39 Bulb 100W
Ukukhanya kweNombane kwe-E39 Bulb 100W I-bbier 100W ikhokelele i-bulb yombona , umgangatho oshushu wokubushushu obukumgangatho ophezulu we-LEDs kunye nomqhubi. Oku kukhokelele kwisibane sombona kwigumbi lokugcina igaraji gcina ngaphezulu kwe-80%...
I-100W E39 ikhokelele ukukhanya kwebhalbhu 13000lm
I-100W E39 ikhokelele ukukhanya kwebhalbhu 13000lm I-bbier 100W ikhokelele i-bulb yombona , umgangatho oshushu wokubushushu obukumgangatho ophezulu we-LEDs kunye nomqhubi. Esi sikhanyiso seBlue yeLed Corn sigcina ngaphezulu kwe-80% yetyala lombane...
I-100W ikhokelele ukukhanya kwe-5000K E26 / E39
I-100W ikhokelele ukukhanya kwe-5000K E26 / E39 I-Bbier i- 120W ikhokelele ukukhanya kwe-E40, umgangatho ophezulu wokubushushu oshushu we- LEDs nomqhubi. Esi sikhanyiso seBlue yeLed Corn sigcina ngaphezulu kwe-80% yetyala lombane ngokutshintsha...
I-E26 E27 I-Corn Cob Light Bulb 15W
I- Amazon ye- 15W Led Corn Lights ithatha indawo ye-bulb incandescent ye-50W kunye nale Dlc Led Corn Light Unokugcina ufike kwi-90% kwi-bill ye-lighting. Ukufika ku-1800 Iimpawu zokukhanya okukhanyayo emini, le Mbewu ye- Corn Cob Light ibhalela...
I-E26 E27 12W Iimboleko Zemiqolo Yemiqolo 277 Volt
I-12W Led Corn Bulb Lowes ithatha indawo ye-bulb incandescent ye-40W kunye ne- Led Corn Bulbs for Sale ingaba i-90% kwi-bill bill yokukhanyisa. Ukufika ku-1440 Iimpawu zokukhanya okukhanyayo emini, ezi ziLimi eziLungileyo zeMigodi 277 Volt ziyahluka...
I-GU24 E27 9W iLight Light Lights for Sale
Ukubuyiselwa kweBlue Bulb ye- 9w yeLed i- 110LM / W, i-White White 5000K kunye ne-9w Led Corn Bulb Menards ukuhlaziywa okugqibeleleyo kwi-bulb 18W incandescent. I-9w Led Corn Light Lights i- Wed Corn Light Lights Can be used in home, market, office,...
I-EW E27 i-Corn Cob Retrofit Bulbs
Ama-Amazon ama-9w Led Corn Bulb ayi-110LM / W, i-White White 5000K kunye nale ndawo ye-6w Led Corn Bulb Home Depot igqityiwe ngokugqibeleleyo kwi-bulb 18W incandescent. I-Ew ye-6 e- E27 i- Corned Cob Retrofit Bulbs kuba w kusetyenziswa idely ekhaya,...
6W E27 I-Corned Cob Light Light Ama-3000K
Ixabiso lento: USD 5.5 / Piece/Pieces
Amanqampu ama-6w Led Corn Cob i- 110LM / W 3000K kwaye le 6w E27 ye- Corned Corn Lamp igxilise ngokugqibeleleyo kwi-bulb incandescent ye-18W. I-6w E27 i- Corned Cob Light Light Bulbs kuba w kusetyenziswa idely ekhaya, kwimarike, ofisi, kwihotele...
9W E27 I-Corned Cob Light Light 990lm
Ixabiso lento: USD 7 / Piece/Pieces
I-9w Led Corn Light Ebay i- 110LM / W, i-White White 5000K kunye ne-6w ye- Light Corn Fixture ibuyele ngokugqibeleleyo kwi-bulb incandescent ye-18W. I-6w E27 iLed Corn Cob kuba w kusetyenziswa idely ekhaya, kwimarike, ofisi, kwihotele ect. Le...
I-E27 6W I-Bulb Light Light ibhekwe ngu-5000K
I-6w yethu yeBlue Light Bulb Led i- 110LM / W, i-White White 5000K kunye nale 6w ye- Corn Cob Led Light ibuyele ngokugqibeleleyo kwi-bulb incandescent ye-18W. I-6w Corn Cob Light Fixture kuba w kusetyenziswa idely ekhaya, kwimarike, ofisi, kwihotele...
I-80W yeCow Cob iLight Light 10400LM
Ukukhanya okuKhanya kweMbewu liphezulu kakhulu nge-130lm / w high watt kwi-lumen output output. UkuKhanya kokuKhanya kweMbewu I-80 ithatha indawo ye-bulb incandescent ye-250W ngelixa ugcina imali eninzi yegesi ngonyaka. Umbane wama-80w wama-Corn Cob...
30W 50W I-Bulb Corn Corn E27
I- Led Corn Bulb 30w iphezulu kakhulu nge-120lm / w high watt kwi-lumen output output. Le ngqayi ye-Corned Led 50w ithatha indawo engu-150W incbescentcent bulb ngelixa igcina ibhanki yamandla kagesi ngonyaka. I I-Bulb ye-Corn E27 ayinayo imisebe,...
E40 20w I-Bulb Corn Corner 26000lm 5000k
I- Bulk Yethu Yobuncwane 20w liphezulu kakhulu nge-130lm / w high watt kwi-lumen output output. Le 20B Led Corn Bulb eCanada ithatha indawo ye-bulb incandescent ye-70W ngelixa ugcina imali eninzi yegesi ngonyaka. I- Led Corn Bulb E40 ayinayo...
I-E27 i-Corned Corn Bulb Iyayinqabisa 60W 7800LM
I- E27 yethu i- Corned Corn Bulb iyayinakalisa liphezulu kakhulu nge 120lm / w high watt kwi-output output. Le Bulb ye-Corner ye-60W yeGaraji ithatha indawo ye-bulb incandescent ye-200W ngelixa ugcina imali eninzi yegesi ngonyaka. Ukuhlaziywa...
KwiChina Amaqabunga okuKhanya okuMbane Abaxhasi
Amaqabunga okuKhanya okuMbane zitshintshwa ngokuthe ngqo kwi-50W - 500W i-Mercury Vapor & Metal Halide Lamps. Izibane zeMbewu eziLwe ziyiyo Iingcamango zezitalato, iindawo eziphakamileyo, izithuba eziphezulu kunye neendawo zokungena phantsi kweendawo zangaphakathi kunye nangaphandle. Corn Iqhubu yenzelwe endaweni UNYANA endala ezikhoyo Metal Halide uhlobo c orn Light , okugqitywa konke.
Amaqabunga okuKhanya okuMbane Led Light Lights Ibhulabhaka leMbewu Ukukhanya kwembombo